Mkpụrụ mmanụ diesel setịpụrụ, Nhazi ihe, Genset, Cummins Generator, Ọdụ Ike-KENTPOWER
KT Ọzọ Brand dizel Generator
KT High-voltaji jenerato
Anyị na-enye akụrụngwa dị elu
Nkọwa: KT-cummins Series Diesel Generator Cummins (NYSE: CMI) hiwere na 1919 ma hiwe isi na Columbus, Indiana, USA. A na - akpọ Cummins aha onye guzobere ya, Claire Lyle Cummins, onye bụ onye na - akụzi onwe ya na igwe na igwe ya. Cummins no n’isi ya na Columbus, Indiana, USA. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ndị ahịa ọrụ site na ụlọ ọrụ nkesa 550 na ihe karịrị 5,000 na-ere ahịa na mba karịrị 160 na mpaghara gburugburu ụwa. Cummins nwere 34,600 ...
KT-Mitsubishi Series Dizel Generator
Nkọwa: Japan si Mitsubishi Arọ Industries Co., Ltd. e guzobere na 1884. Ọ bụ otu n'ime ụwa n'elu 500 ụlọ ọrụ na-họọrọ nke abụọ na izugbe igwe Atiya. Mitsubishi Arụ Ọrụ Dị Ukwuu malitere ịmalite ma mepụta injin mmanụ dizel na jenerato setịpụrụ na 1917. Ọ bụ naanị Mitsubishi Heavy Industries rụchara ya, mepụta ya na nnwale nke ihe ndị mejupụtara ya. Mitsubishi diesel generator sets nwere ike na-arụ ọrụ inogide n'okpuru oké gburugburu ebe obibi conditio ...
KT-Deutz usoro Diesel Generator
Nkọwa: Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. bụ nke onye guzobere ụlọ ọrụ njin ụwa - German Deutz AG na ụlọ ọrụ ụgbọ ala ndị China Onye isi nke China FAW Group Corporation tinyere ego nke RMB ijeri 1.4 na 50% ruru ma guzobe ya na August 2007. E nwere ndị ọrụ 2,000 na ikike mmepụta kwa afọ nke ngalaba 200,000. Companylọ ọrụ ahụ nwere usoro ikpo okwu ike ụwa. Ndị na-eduga ngwaahịa bụ C, E ∕ F, DEUTZ atọ ngwaahịa nyiwe, atọ usoro o ...
KT-Perkins usoro Dizel Generator
Nkọwa: Perkins Engine Co., Ltd. bụ enyemaka nke Caterpillar Corporation ma bụrụ otu n'ime ndị na - eweta mmanụ dizel na gas gas. E guzobere Perkins Engine Co., Ltd. na 1932, na-enwepụta kwa afọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe 400,000. Perkins na-enye mmanụ dizel 4-2000 kW na gas gas na nnukwu ndị nrụpụta akụrụngwa ike dịka Chrysler, Ferguson na Wilson. Ihe karịrị ndị na - emepụta ndị ọrụ 800 na - ahọrọ ikike ikike Perkins na ọrụ ugbo, ikike generati ...
KT-Doosan usoro Dizel Generator
Nkọwa: Doosan Mobile Power bụ nkewa nke otu Doosan South Korea. Na onwa Nọvemba 2007, Doosan Group, otu n’ime ulo oru Fortune 500 n’uwa, nwetere ufodu oru ahia Ingersoll Rand. Mgbe usoro njikọta azụmahịa gasịrị, e guzobere Doosan Mobile Power Division. Doosan Mobile Power na-enye akụrụngwa ike mkpanaka maka akụrụngwa zuru ụwa ọnụ, Ngwuputa, ịrụ ụgbọ mmiri, mmepe ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ injinịa, gụnyere igwe ikuku ...
Nkọwa: Ricardo Series Engine Diesel Generator nwere ezigbo ọnụ ahịa ọnụahịa Ngwaahịa: Ricardo Genset, Kofo Genset, Ricardo Diesel Generator, Kofo Diesel Generator, Ricardo Kofo Power Station Power Generator, Genset, Generator set, Power Station, Generating set, Kentpower, Cummins Dizel Generator, Generator Parts, Geneset Parts, Perkins Generator, Sizil Diesel Genera Nkọwapụta:
Nkọwa: Yanmar bụ onye nrụpụta injin mmanụ dizel nke Japan nwere akụkọ ihe karịrị 100 afọ. Companylọ ọrụ ahụ na-emepụta injinị maka ọtụtụ ngwa: wiilị ụgbọ mmiri, akụrụngwa ihe eji arụ ọrụ, akụrụngwa akụrụngwa na usoro generator. Isi ụlọ ọrụ ahụ dị na Chaya, North District, Osaka, Japan. YANMAR Co., Ltd. nke Japan edugawo ụwa na ngwaahịa ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi nwee ikuku na-emetọ ikuku, obere mkpọtụ na ịma jijiji. Ebumnuche Yanmar bụ ime ka en ...
Nkọwa: Ntọala na 1951, Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. (Yuchai Group maka mkpụmkpụ) dị na Yulin, Guangxi Zhuang Autonomous Region. Ọ bụ ụlọ ọrụ na ntinye ego na njikwa ego, dabere na ọrụ isi obodo na njikwa akụ. Dika ulo oru ndi nwe obodo buru ibu, o nwere ihe kariri ndi nwe 30, ndi nwere, ma obu ndi jikoro aka ha, nwere onu ogugu nke yuan 40.5 na ndi oru 20,000. Yuchai Group bụ esịtidem combustion e ...
Fujian Kent usoro na eletriki CO., LTD (KENTPOWER maka obere), tọrọ ntọala na 2005 na a aha isi obodo nke USD $ 15 nde, imewe na rụpụta mmanụ dizel generator setịpụrụ, gas gas generator setịpụrụ, usoro ike anyanwụ, ijikọta ịgbakọta, ahịa na mmezi ọrụ. The ụlọ ọrụ dị na Fuzhou obodo, Fujian n'ógbè, na mpaghara nke 100000 square mita, n'elu 100 ọrụ. A na-ejikarị ngwaahịa ya eme ihe dị ka ike nchekwa ma ọ bụ ike mberede n'ọtụtụ mpaghara dị mkpa, gụnyere okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ oloko, mansions, hotels, mines, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na usoro ntanetị na usoro ego, wdg.
Akụkọ ụlọ ọrụ na akụkọ ụlọ ọrụ
DENEL GENERATOR WEP FORTARA BBRETA Anụmanụ
Ulo oru anumanu na-eto site na usoro omenala rue mkpa nke oru ndi oru. Nri nri, akuku ozuzu, na ikuku na ngwa nkpiri bu ihe ndi ozo, nke choputara na d ...
HOSPITAL STANDBY Diesel Generator WEPETTARA
Generatorlọ ọrụ na-enye ikike inye nkwado ndabere nke ụlọ ọgwụ na ikike inye nchekwa ụlọ akụ nwere otu ihe achọrọ. Ha abụọ nwere njirimara nke ike na-aga n'ihu yana gburugburu ebe obibi. Ha nwere nlezianya chọrọ na arụmọrụ arụmọrụ ...
DENEL GENERATOR WEP FORTARA AKW COMKWỌ AH IR I ỌR COM
KENTPOWER na-eme ka nkwukọrịta dịkwuo nchebe. A na-ejikarị ihe ndị na-emepụta diesel eme ihe maka ike ike na ọdụ na ụlọ ọrụ nkwukọrịta. Mpaghara mpaghara mpaghara dị ihe dịka 800KW, ebe ọdụ ụgbọ oloko dị 300-400KW. Ohaneze, ihe ...
ỌGW D mmanụ dizel generator
Arụ ọrụ chọrọ nke onye na-ewe mmanụ diesel maka ihe owuwu ubi bụ ịnwe ikike mmebi nke ukwuu, enwere ike iji ya mee ihe n'èzí niile. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịmegharị ngwa ngwa, nwee arụmọrụ kwụsiri ike na ịrụ ọrụ dị mfe. KENTPOWER bụ atụmatụ ngwaahịa pụrụ iche maka ubi: 1. ...
ARMY dizel Generator WEPETTARA
Igwe ihe eji arụ ọrụ agha bụ ihe dị mkpa maka inye onyinye maka ngwa ọgụ n'okpuru ọnọdụ ọnọdụ. A na-ejikarị ya eme ihe iji nye nchekwa, nke a pụrụ ịdabere na ya ma dị irè maka ngwa agha, iwu ọgụ na nkwado akụrụngwa, iji hụ na arụmọrụ nke ngwa ngwa ọgụ na nrụpụta ...
Office tinye: No.12, Jinzhou North Road, Fuzhou, China
Factory tinye: Tieling Industrial Mpaghara, Fuzhou, China
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka gị n'ime 24 awa.